တစ်ယောက်တည်းခရီးသွားခြင်း (သို့) စနစ်တကျစုစည်းထားခြင်းခံရတဲ့အုပ်စုတစ်ခုမှာ - ငါဘယ်ရွေးမလဲ | Absolut ခရီးသွားခြင်း
Susana godoy | | အခြားသူများကို
ဟုတ်လားမင်းစဉ်းစားဖူးလား တစ်ယောက်တည်းခရီးသွားခြင်း၊? ကောင်းပြီ၊ ၎င်းကိုအမြဲတမ်းဖြေဆိုရန်မလွယ်ကူသောမေးခွန်းတစ်ခုဟုဆိုရမည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီမှာငါတို့မှာလုံးဝခိုင်လုံတဲ့ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုရှိပြီးသူတို့ရဲ့အားသာချက်များအပြင်အားနည်းချက်တွေပါပါတယ်။
El ခရီးသွား ၎င်းသည်အတွေ့အကြုံတစ်ခုသာဖြစ်နိုင်သော်လည်းစနစ်တကျစုစည်းထားသည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင်ခရီးသွားခြင်းသည်နောက်မကျပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သံသယများရှိပါကအပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမှီ၎င်း၏အဓိကအချက်များအားလုံးကိုဆန်းစစ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်တစ်ကြိမ်တည်းနှင့်အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်လိုပါသလား။ ကျနော်တို့အဖြေရှိသည်!
1 တစ် ဦး တည်းခရီးသွားလာ: အလွန်ကြီးစွာသောအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို
1.1 တစ် ဦး တည်းခရီးသွား၏အားသာချက်များ
1.2 တစ် ဦး တည်းခရီးသွားခြင်း၏အားနည်းချက်များ
2 ဖွဲ့စည်းထားသည့်အုပ်စုတွင်ခရီးသွားခြင်း - ဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်မဟုတ်လော။
3 တစ်ယောက်တည်းလား၊ စုစည်းထားသလား။
တစ် ဦး တည်းခရီးသွားလာ: အလွန်ကြီးစွာသောအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို
တစ် ဦး တည်းခရီးသွား၏အားသာချက်များ
တစ်ယောက်တည်းခရီးသွားခြင်း၏ကြီးမားသောကောင်းကျိုးတစ်ခုမှာသင်၌ရှိသည်မှာသေချာသည် အများကြီးပိုလွတ်လပ်ခွင့် ဆုံးဖြတ်ရန်။ တဖကျတှငျ, အချိန်ဇယားများကိစ္စနှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်တို့ကိုသွားရောက်မယ့်ဒေသများရှိလည်း။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အရာတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးယူရင်တောင်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်မှာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲလို့ရပြီးအဲဒါကငါတို့ပြောခဲ့တဲ့လွတ်လပ်မှုကိုပေးလို့ပါ။ ထို့အပြင်အရာအားလုံးသည်သင်၏အကောင့်ပေါ်တွင်လည်ပတ်နေသဖြင့်၊ သင်သွားလိုသည့်နေရာကိုရွေးချယ်သည့်အခါ၊ ခရီးစဉ်ကိုယ်တိုင်၊ ဟိုတယ်စသည်ဖြင့်ငွေစုဆောင်းနိုင်သည်မှာမှန်ပါသည်။
တစ် ဦး တည်းခရီးသွားခြင်း၏အားနည်းချက်များ
ရှိသည်သောလူများစွာသည် တစ် ဦး တည်းခရီးသွား၏အလေ့အကျင့်သူတို့မှာထိုကဲ့သို့သောအားနည်းချက်များမရှိပါ။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုကိုမီးမောင်းထိုးပြရမယ်ဆိုရင်တော့ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်ရမယ်။ ဒါကြောင့်အရှိဆုံးနှံ့နှံ့စပ်စပ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုပိုကြာစေနိုင်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟိုတယ်သို့မဟုတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောလုပ်ဆောင်မှုအချို့ကိုရွေးချယ်မိသည်အထိပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤ 'အသေးစိတ်' အမျိုးအစားပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်ပြောသည့်စကားလည်းဖြစ်သည်။ များစွာသောသူတို့အဖို့အဆင်မပြေမှုအချို့ကြုံရသောအခါတစ် ဦး တည်းနေခြင်းသည်တောင်ပေါ်စစ်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
ဖွဲ့စည်းထားသည့်အုပ်စုတွင်ခရီးသွားခြင်း - ဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်မဟုတ်လော။
အဓိကတစ်ခုမှာထိုအရာဖြစ်သည် သင်လူသစ်များကိုတွေ့လိမ့်မည်ဒါကြောင့်လည်းခရီးစဉ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေထဲကတစ်ခုလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်ဘာသာစကားပြaနာဖြစ်နိုင်သည်ရှိရာအခြားနိုင်ငံများသို့သွားလျှင်, အုပ်စုသည်နောက်တဖန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခရီးစဉ်ရဲ့လမ်းညွှန် (သို့) ညှိနှိုင်းရေးမှူးကအမြဲတမ်းအရာရာတိုင်းကိုဂရုစိုက်မှာပါ။ မဟုတ်လျှင်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအကြားမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိမည်။ အရာအားလုံးချောချောမွေ့မွေ့သွားသည်ဖြစ်စေ၊ ပြaနာတစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာသည်ဖြစ်စေ၊ လူတွေကသင့်ကိုအမြဲတမ်းဝိုင်းထားလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ကိစ္စနှစ်ခုလုံးမှာအရာအားလုံးပိုကောင်းတာပေါ့။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၏ကြီးလေးသောအချိန်လေးကိုမျှဝေခြင်းထက်အဘယ်အရာက ပို၍ လှပသနည်း။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုစီစဉ်ရန်မလိုကြောင်းနှင့်အချိန်နှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းမိသည်ကိုမမေ့သင့်ပါ။ ဤခရီးစဉ်သည်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်သာဖြစ်သည်ဟူသောအယူအဆနှင့်ဆက်စပ်နေသော်လည်းလူငယ်များသည်လည်းသူတို့နှင့်စတင်နေသောကြောင့်အဖြစ်မှန်မှနောက်ထပ်ဘာမှမရကြပါ။
အများစုအတွက်တစ်ခုဖြစ်သည် စနစ်တကျစုစည်းထားသည့်အုပ်စုအတွင်းခရီးသွားခြင်း၏အားသာချက်များ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အစီအစဉ်များနှင့် 'စီစဉ်ခြင်း' တွင်ပါသောလည်ပတ်မှုများအားလုံးကိုလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်လူအများစုအတွက်သင်ဟာအများကြီးပိုလိုချင်တဲ့အချိန်ကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားဖို့လိုသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတစ်နေ့တာ၏အချို့သောအချက်များနှေးကွေးလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူနှစ်ဆယ်ကိုသွားတာထက်လူ ၃၀ ကိုစုစည်းတာနဲ့အတူတူမဟုတ်ဘူး။ ထို့ကြောင့်အချိန်ကာလပြissueနာသည်ဤကိစ္စတွင်အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြံဆတီထွင်မှုအတွက်အချိန်မရှိတော့သည့်အပြင်အသက်အရွယ်မရွေးလူအားလုံးနှင့်အတူရှိပါမည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်အမြဲလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ ထို့အပြင်ဤခရီးစဉ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုမိုစျေးကြီးသည်ဟူသောအချက်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်ထားပြီးသောအရာအားလုံးနှင့်အတူသွားသောကြောင့်၎င်း 'extras' အတွက်ပေးဆပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုသီးခြားမြင်ပြီးအားသာချက်များအပြင်အားနည်းချက်များကိုထပ်မံပေါင်းထည့်ပြီးနောက်စတော့ရှယ်ယာရှာခြင်းကဲ့သို့ဘာမှမရှိပါ။ ၎င်းသည်တစ်ခုချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်အပေါ်အမြဲမူတည်နေကြောင်းထင်ရှားသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကနည်းနည်းလေးပိုပေးဆပ်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်စည်းရုံးခြင်း၊ လက်မှတ်ဝယ်ခြင်း၊ ကြိုတင်မှာကြားထားပါအကောင်းဆုံးအရာကစုစည်းထားတဲ့အုပ်စုပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဘဝအတွေ့အကြုံအဖြစ်, ဖြစ်ကောင်းတစ် ဦး တည်းခရီးသွားအမြဲကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်သင်ကြံဆမှုပြုရန်နှင့်သင်သာဆုံးဖြတ်မည့်အချိန်ဇယားကိုတည်ဆောက်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းငါတို့မလုပ်နိုင်ဘူး တစ် ဦး တည်းသော်လည်းကောင်း၊ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အုပ်စုတွင်သော်လည်းကောင်းခရီးသွားခြင်းကိုအကြံပြုပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသင့်ရဲ့အရသာသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်အပေါ်အမြဲမူတည်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပြောနိုင်တာကအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်မျိုးစလုံးကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်မျိုးလုံးမှာသင်ရကျိုးနပ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ အားနည်းချက်တစ်ခုပေါ်လာပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ ပြီးတော့ဘယ်တစ်ခုကိုရွေးမလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » တစ်ယောက်တည်းလား၊ စုစည်းထားသလား။